यस कारण पाएन सरकारले पुर्णता ! हेर्नुहोस् ४ कारण – Setosurya
यस कारण पाएन सरकारले पुर्णता ! हेर्नुहोस् ४ कारण
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सोमबार चार मन्त्री नियुक्त गर्दै दोस्रोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् । एमाले र माओवादी केन्द्रबाट १५ मन्त्रीलाई एकैपटक शपथ खुवाएर मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने प्रधानमन्त्रीको तयारी भने लम्बिएको छ ।
एमालेमा मन्त्रीका आकांक्षी धेरै छन् । अर्थमन्त्रीको दौडमा रहेका ईश्वर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली, सुरेन्द्र पाण्डेलगायतको सट्टा प्रधानमन्त्री ओलीले विषयविज्ञका रूपमा डा. युवराज खतिवडालाई अर्थमन्त्री बनाए । पोखरेलले खासै रुचि नभएको रक्षा पाएका छन् भने दौडमा रहेका अन्य नेताहरूले पनि रोजाइको मन्त्रालय पाउने सम्भावना कम छ । सचिवद्वय योगेश भट्टराई र गोकर्ण विष्टसँगै स्थायी समिति सदस्य छविलाल विश्वकर्मा पनि मन्त्रीका दाबेदार छन् । त्यस्तै, भानुभक्त ढकाल, रवीन्द्र अधिकारी, यज्ञराज सुनुवार, वसन्त नेम्वाङ, रघुवीर महासेठ, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, पार्वत गुरुङ, शेरबहादुर तामाङ, गोकुुल बाँस्कोटा, जगत विश्वकर्मा, प्रेम आले, नारदमुनि राना, राजेन्द्र गौतमलगायत डेढ दर्जनभन्दा बढी दौडमा छन् ।
मातृका यादव भन्छन् – गडबड गर्नेलाई छाड्दिन, त्यस्ता कर्मचारीका लागि म खतरा हुँ ! भिडियो सहित
२ सय १० स्थानको मत परिणाम आउँदा एमाले ९९ स्थानमा बिजयी अन्य दल को कति हेर्नुहोस्
मोदीखोलामा पुल निर्माण कार्य ठप्प
स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनः गाउँपालिकामा अधिकृत, गाविस सचिवलाई वडा सचिव बनाउने
प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलगायत एमाले नेताका घरमा मोर्चा कार्यकर्ताले गरे तोडफोड
दोस्रो चरणको चुनाव जेठ १५ अगावै ! प्रमुख दलहरुबीच नयाँ सहमतिको प्रयास
यी हुन् निर्मलाका हत्यारा लुकाएका आरोप लागेका एसपी बिष्ट !
फेवा किनाराबाट सराङ्कोट केबलकारैमा…………..
पर्वतमा आएर यसरी नाचे प्रधानमन्त्री दाहाल (हेर्नुहोस् भिडियो)
सीडीओ गृहमा तानिएपछि कर्फ्यु लगाउने निर्णय ‘खारेज’
वाम एकतापछि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको सक्रियता बढ्दै : कांग्रेस र सेनाको दरिलो साथ
स्थानीय निर्वाचनः पूर्वमा अवैध हतियार नै मुख्य चुनौती
अनुगमनमा आउने सरकारी टोलीलाई जुत्ताको माला लगाइदिन्छौँ : तरकारी व्यापारी
यी ४ गम्भिर विषयमा प्रचण्ड ओलीबीच छलफल हुँदै, निष्कर्ष के होला ?
हेर्नुहाेस् निर्मला पन्तका दोषीलाई उन्मुक्ति दिन खोजेको ५ खुलासा ! डिएनएमा समेत गडबडी……..
माधब नेपालको गृह जिल्लामा किन हा¥यो एमाले ? यस्तो छ कारण :